WARBIXIN: Chelsea oo badalka Eden Hazard ka dhex aragtay Camp Nou & suuragalnimada ay ku heli karto. – Gool FM
WARBIXIN: Chelsea oo badalka Eden Hazard ka dhex aragtay Camp Nou & suuragalnimada ay ku heli karto.
(London) 01 June 2019. Kooxda Chelsea ayaa u muuqata mid garwaaqsatay bixitaanka Eden Hazard, waxeyna sii eeganeysaa badalkiisa oo ay ka dhex aragtay durba Camp Nou sida ay sheegayaan warbixinno ka imaanaya gudaha Spain.
Inkastoo ay jirto arrin muddo dheer soo jiitameysay oo u dhaxeysa labada kooxood ee Blues iyo Los Blancos kuna aadan heshiiska Hazard, hadda wax walba waa dhaw yahiin sida la sheegay, sidaas darteed kooxda London ka dhisan waxey markaan badalkiisa la damacsan tahay Philippe Coutinho.
Iyadoo ay sidaas tahay hadana Barcelona waxey raadineysaa qaab ay isaga fogeyso xiddiga lacagaha faraha badan ay kagala soo wareegeen Liverpool horantii 2018, waxaana lagu sheegaa adduun dhan 160 Malyan oo Yuuro.
Blues waxey baahi u qabtaa xiddigaan si uu badal guuleysta ugu noqdo Hazard, iyadoo ka warqabta bandhigii lala cajiibay uu ka sameeyay Premier League mudadii uu xirnaa maaliyadda Reds.
Dhibaatada jirta waxey tahay Blues waxey qarka u saaran tahay in ganaaxooda labada suuq uu hirgalo, mana lasoo saxiixan doonaan ilaa July 2020 hadii uu ku dhaco ganaaxa, kiiska lagu heystana waa iney si sharci darro ah ciyaartoy da’yar ula soo wareegtay.
Dhanka kale Man United & Paris Saint Germain ayaa xiiseynaya xiddigaan kuwaas oo isku dayi doona iney dib usoo celiyaan niyadda sii dhimaneysa ee xiddiga reer Brazil.
Halyeeyada kubadda cagta oo muujiyay aragtidooda kaga aadan finalka Champions League